Inta badan Musharaxiinta iyo Wakiilada Beesha Caalamka oo gaaray Hoolka doorashada – STAR FM SOMALIA
Diyaar garowgii u dambeeyay ee doorashada Madaxweynaha ayaa lagu guda jira, iyadoo wali lagu qul qulayo hoolka ay ka dhaceyso doorashada oo ku yaalla Avisioni, iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay.
Hoolka ayaa waxaa wali ka jira buuq iyo is dhex yaac badan, waxaana Guddiga doorashada uu isku dayayaa inuu nidaamiyo goobta oo xildhibaanada is bar bar socda ay fariistaan.
Sidoo kale waxaa laga codsanayaa Xildhibaanada inay warqada xaadirnimada saxiixaan, si loo ogaado, tirada rasmiga ah ee Xildhibaanada soo xaadirtay.
Inta badan Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa gaaray hoolka doorashada, iyadoo loo diyaar garoobayo inay bilaabato codeynta, waxaa musharaxiinta ay kaamirada qabatay ka mid ahaa, Shariif Sheekh Axmed, C/raxmaan C/shakuur, Maxamuud Culusow, Saciid Deni, C/naasir Cabdulle, Jabriil Ibraahim Cabdulle, Maxamed Cali Ameeriko.
Xildhibaanada ayaa u muuqata in aanay intooda badan ku sugneyn, taas ayaa keeni karta in saacado dib u dhacdo, isla markaana doorashada ay qaadato saacado badan oo ay xataa gaarto saq dhexe.
Wakiilo ka socda Beesha Caalamka ayaa gaaray, waxaa ka mid ah Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating, Safiirka Sweden iyo safiiro kale.
Telefishinada Soomaalida ayaa si toos ah u sii deynaya, waxaana bixinaya live-ka tooska ah Xafiiska Qaramada Midoobey ee UNSOM.
War Deg Deg Ah: Codeynta Doorashada Wareegii koobaad oo soo dhamaatay iyo tirinta Codadka oo bilaabaneysa